औषधिको नामको पछाडी जोडिएको कुराले के संकेत गर्छ ? - Complete Nepali News Portal
औषधिको नामको पछाडी जोडिएको कुराले के संकेत गर्छ ?
वरिष्ठ औषधि विशेषज्ञ
नेपालीमा चिकित्सकको सल्लाहविना आफूखुशी नै औषधि पसलबाट विभिन्न थरिका औषधि किनेर खाने चलन छ । अर्को कुरा डाक्टरले लेखेको औषधि एउटा हुन्छ, विरामीले अर्कै औषधि खाइरहेका हुन्छन् । यस कुराको ख्याल विरामी र डाक्टर दुवैलाइ थाहै हुँदैन ।
यसरी डाक्टरले लेखिदिएको औषधि नखाएर अर्को वा उस्तै औषधि खाएर कसरी रोग ठिक हेअोस् । यहि कुरालाइ मध्यनजर गर्दै आज हामी तपाईलाई वरिष्ठ औषधि विशेषज्ञसँग औषधिको नामको पछाडी जोडिएको कुराले के संकेत गर्छ ? भन्ने विषयमा गहन र महत्वपूर्ण कुरा लिएर आएका छौँ । आशा छ तपाईलाई अवश्य मन पर्ने नै छ ।